Habibiana :: Olona efatra notsatotsatohan’ ilay lehilahy tamin’ny antsy • AoRaha
Habibiana Olona efatra notsatotsatohan’ ilay lehilahy tamin’ny antsy
Maratra mafy miady amin’ ny fahafatesana ny olona efatra vokatry ny tsatok’antsy lehibe nataon’ny lehilahy iray, tany Ambodimanga-Tsarabaria, any Iharana, tamin’ny 28 jona lasa teo. Naratra ihany koa ilay lehilahy taorian’izay voalaza fa nikasa hamono tena ka nanatsatok’ antsy tamin’ny vatany nataony izy tenany ihany.
Ahiana ho vokatry ny fifohana zava-mahadomelina no nahatonga ity loza tany Iharana ity. “Izay olona rehetra nifanena tamin’ilay lehilahy na vehivavy na lehilahy mitovy aminy dia notsindroniny tamin’ny antsy lehibe iray teny an-tanany daholo. Nisy ny voa avy amin’ny kibony. Nisy ireo voatsindrona tany amin’ ny lamosiny ary ny sasany tamin’ ny lohany. Ny an’ny vehivavy iray niditra teo amin’ny masony ilay zava-maranitra”, hoy ny loharanom-baovao avy any Iharana, omaly.
Efa vosambotry ny zandary ilay lehilahy nahavanon-doza. Samy manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly na ireo voatsindron’antsy na ity farany. “Taorian’ ny nahavitany ireo heloka ireo dia niakatra teny ambony hazo ilay lehilahy. Teny izy no nanindrona antsy ny tenany no sady nianjera”, hoy hatrany ny angombaovao avy any an-toerana.
Fandikana fepetra :: Mpamily enina amby roapolo voasambotra
Fahafatesana mampiahiahy :: Misy dian’antsy ny saokan’ ilay vehivavy hita faty